Hain-trano Vehivavy roa maty teny Ankadivato
Nisy firehetana trano lehibe teny Ankadivato ny alarobia teo, ary tena goavana ny fahavoazana na tonga namono ny afo aza ny mpamonjy voina.
Vehivavy no namoy ny ainy nandritra ny loza. Nalefa teny amin’ny tranompatin’ny Hopitaly HJRA ny razana taorian’ny loza. Tonga haka azy ireo ny havany omaly, saingy tsy navoakan’ny tao ny razana fa miandry “Médécin légiste”, hoy ny vaovao niely. Nantsoina ilay Médécin légiste dia nandray fa vao resaka asa dia vonoiny ny finday fa andro tsy fiasana, hono, hoy hatrany ny fitarainana niely. Tsy misy afaka manolo azy na mpiandry raharaha mihitsy ve ao amin’ilay sampandraharaha fa ny mpiambina tsy afaka manapa-kevitra ihany ? Mety manana ny rariny ny tao amin’ilay sampandraharaha saingy mila fandraisan’andraikitra sy fandaminan’asa ny zavatra tahaka izany mba ho fitsinjovana ireo manan-draharaha satria volam-bahoaka no hanakaramana ireo mpiasam-panjakana amin’itony sehatra itony.